Wzọ 3 iji nakọtara ịtụ anya data na LinkedIn Integrated Lead Generation Forms | Martech Zone
LinkedIn na-aga n'ihu bụrụ isi mmalite maka azụmaahịa m ka m na-achọ atụmanya na ndị mmekọ maka azụmaahịa m. Amaghị m na otu ụbọchị anaghị agafe na anaghị m etinye aka na akaụntụ aka ọrụ m iji jikọọ ma zute ndị ọzọ. LinkedIn na-aga n'ihu na-amata ọnọdụ ha dị mkpa na mgbasa ozi mgbasa ozi, na-eme ka ikike azụmaahịa jikọọ maka ịbanye ma ọ bụ nweta.
Ndị ahịa na-amata na nsonaazụ nchịkọta na-ebelata nke ukwuu ka atụmanya si na ihuenyo gaa na ihuenyo. Ptchọta ndu n'isi elu nke mmasị ha na-ebelata esemokwu na ịgbahapụ. N'iburu nke ahụ n'uche, Azụmaahịa LinkedIn na-enye azịza atọ site na ngwa mgbasa ozi ya. Ebe ọ bụ na profaịlụ LinkedIn nwere ọtụtụ ndị na-azụ ahịa ozi gbasara azụmaahịa na ụlọ ọrụ ahịa chọrọ, ọ bụ naanị ihe ezi uche dị na ịgbanwee ntụgharị site na peeji nke mpụga na LinkedIn ebe ntụgharị nwere ike ime ozugbo.
Fordị Ọgbọ Na-eduga Maka Ọdịnaya Na-akwado
Ejiri LinkedIn LinkedIn Lead Gen msdị maka Ọdịnaya nkwado. Mgbe ị na-akwado ọdịnaya na LinkedIn ma mmadụ pịa, ụdị na-akpaghị aka na njirimara profaịlụ LinkedIn karịa ịnweta atụmanya ga-eji aka gị jupụta data.
Akwụkwọ akụkọ LinkedIn na-akọ na ndị na-ere ahịa na-eji ọdịnaya akwadoro belata ego ha na-efu kwa ndu ihe karịrị 20%. Site na nsonaazụ ndị ahụ, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na LinkedIn gbasaa ma kwupụta na ha ga-eduga ikike ikike agbakwunye na Mgbakwunye InMail na Dynamic Ads.
Bido site na nkwado nkwado LinkedIn
Fordị Ọdịdị Na-eduga Maka InMail Na-akwado
Ndị na-ere ahịa ọgbọ na-eji InMail Sponsored eme ihe iji ruo ndị otu nwere ozi nkeonwe, otu n'otu na LinkedIn. Ọnụ ọgụgụ mepere emepe maka Inmail na-adịkarị karịa 40% na ọnụego ntụgharị nwere ike ịkwalite site na akpaghị aka gụnyere aha atụmanya, adreesị ozi-e, aha ọrụ, aha ụlọ ọrụ, na mpaghara ndị ọzọ na profaịlụ LinkedIn ha Na ule beta nke LinkedIn, ndị mgbasa ozi na-eji Gendị Gen Gen for Sponsored InMail hụrụ ekwentị ha ntụgharị ntụgharị na-abawanye site na nkezi nke 3x tụnyere ọkọlọtọ ọdịda peeji nke.
Ndị na-ere ahịa nwekwara ike ịjụ ajụjụ gbasara omenala 3 na Lead Gen Form iji chịkọta data na-eduga karịa mpaghara ọkọlọtọ enyere.
Ebumnuche Gen na-eduzi maka InMail akwadoro emeela ka ọ dịrị ndị na-ege anyị ntị ịchọrọ ka ha rịọ maka ndị ahịa anyị ozi. Anyị ekwesịghị ịkpaghasị ahụmịhe LinkedIn ha, mana ka na-agakwuru ha na ozi LinkedIn. Ọ bụụrụ ya onye na-agbanwe egwuregwu maka mbọ ndị ọgbọ anyị na-agba. Benjamin Sandman, Onye Mmekọ na 5 Horizons Digital
Bido na LinkedIn Sponsored InMail
Leaddị Ọdịdị Na-eduga Maka Mgbasa Ozi Mgbanwe
Ndị na-ere ahịa na-eji Mgbasa ozi Mgbasa ozi LinkedIn iji wuo mgbasa ozi ahaziri iche, na-adọrọ mmasị. Mgbasa ozi ndị a anapụta 2x elu pịa-site udu karịa mgbasa ozi ngosi ngosi n'ihi na a na-ahazi ha na-akpaghị aka ịgụnye aha, foto profaịlụ, aha ọrụ, ma ọ bụ ọrụ ọrụ nke onye otu na-elele ad. Site na LinkedIn kachasị ọhụrụ Dynamic Ads na-eduga usoro usoro, ị nwere ike ịmepụta ndu ozugbo ma mee ka nbudata ọdịnaya - dị ka nbudata nke ebook ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ - site na ngalaba mgbasa ozi n'onwe ya.
Naanị ịpị aka ole na ole na Mgbasa ozi Mgbasa Ozi Dynamic, ndị otu nwere ike zitere gị aha ha na adreesị ozi-e, na-enweghị ịpị aka ha. Ozugbo mmadụ nyefere ozi ha site na ngalaba mgbasa ozi, ọdịnaya gị ga-amalite ibudata na desktọọpụ ha na-akpaghị aka.
Ndị na-ere ahịa nwere ike ịnweta na-eduga site na Mgbasa Ozi Mgbasa ozi, ma ọ bụ na-agafe na-eduga na akpaaka ahịa ha ma ọ bụ usoro CRM. Anyị na-akwado DriftRock, Marketo, Microsoft Dynamics 365, Oracle Eloqua, na Zapier.
Bido na Mgbasa ozi Mgbasa Ozi LinkedIn
Kacha ọhụrụ Dynamic Ads na-eduga usoro usoro dị taa site na akaụntụ akaụntụ LinkedIn gị. Ebumnuche nke Gen maka Sponsored InMail ga-ewepụta n'izu a maka ndị ahịa niile n'ime izu abụọ na-abịanụ, ma ị na-arụ ọrụ na LinkedIn rep ma ọ bụ na-agba ọsọ mgbasa ozi onwe gị na Mgbasa Ozi Manager.
Tags: b2bb2b mgbasa oziCRMDriftRockike mgbasa ozindu genedu ọgbọmgbasa ozi Leadgennjikọ mgbasa ozilinkedin ike mgbasa ozinjikọ njikọta genNjikọ ndu jikọtara yaakụrụngwa ahịaahịamicrosoft na-agbanwe agbanwe 365okwu eloquaakwụkwọ ozi inmailike